लघुकथा : दृष्टिकोण / लीलाराज दाहाल – सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका
सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका > साहित्य > कथाख्यान > लघुकथा : दृष्टिकोण / लीलाराज दाहाल
के रे ? के रे ? के भो रे भाउजू ? दाइले फेरि कुटे रे ? फेरि घरेलु हिंसा गरे रे ? कस्ता पुराना सोचाइका छन् दाइ पनि । मूर्खताको लौरो बोकेर हिँड्न कहिलै
छोडेनन् दाइले अहिलेको समयमा पनि । अब नसम्झाई भएन दाइलाई । उनले लगाइरहेको अन्धविश्वासको चस्मा फुकाल्न लगाउनुपर्छ छोरी मात्रै जन्मनुमा तपाईंको के दोष छ र भाउजू ? छोराछोरी एकै हुन् भनेर म सम्झाइदिउँला दाइलाई । सम्झाउँदा पनि नभए गाउँ समाजमा बसेर छलफल पनि गरौँला नि ¤ छोरी मात्रै जन्मे भनेर खिन्नताको ओछ्यानमा सुतिरहने हो र ? छोरी पनि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख भएका छन्, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, वकिल, वैज्ञानिक कति भएका छन् छन् । छोरीलाई पनि सक्षम नागरिक बनाए त छोरा जत्तिकै भैहाल्छन् नि ¤ तपाईं नरुनुस्, भाउजू । घर जानुस्, घर । अब तपाईंमाथि घरेलु हिंसा हुन दिन्नँ म । तपाईं घर जानुस् अहिले ।
आदरणीय जनसमुदायहरू ¤ मेरो यत्रो लामो भनाइको अर्थ के हो भने अब तपाईं हामीले छोराछोरीमा भेदभाव नगरौँ । यो एक्काइसौँ शताब्दीमा छोरा छोरी एकै हुन् । छोराछोरीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । पढाइ लेखाइमा दुवैलाई समान अवसर दिनुपर्छ । अब आइन्दा छोराछोरीमा भेदभाव नगरौँ
भन्दै म आप्mनो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु । धन्यवाद ¤
के भो रे ? छोरीले भाडा सफा गरिन रे ¤ ओहो ¤ के अनर्थ हुन लागेको हो यो घरमा ¤ ए छोरी, रीता ¤ यता आइज आइज । तैँले भाडाकुँडा किन सफा नगरेकी रे ¤ गृहकार्य गर्दागर्दै भ्याइनस् रे ¤ के हुन लागेको हो आजकल ? स्कूलको गृहकार्य घरायसी कामधन्दा सकेर पो गर्ने हो त छोरी ¤ के भएकी तँ ? के रे के रे ? पल्लो घरकी कमला आन्टीको छोराले घरको काम गर्नुपर्दैन रे ¤ ऊ पढी मात्रै रहन्छ रे ¤ घरको काम नगरी पढी
मात्रै रहनलाई त छोरै भएर जन्मनुपर्छ,
बुझिस् छोरी ¤ लुजा छिटो काम सकी हाल् । के गर्नु छोरो भएर जन्मिनस् ¤ नत्र पढ्न पाउँथिस् नि ¤
… त्यसो नभन न प्यारी ¤ म त राजनीति, समाजसेवा गर्नुपर्ने मान्छे ¤ एउटा छोरो पनि नभए कसरी मुख देखाउनु समाजमा ¤ छोरा नभए त स्वर्गको बाटो बन्द हुन्छ भन्छन् । चारवटी छोरी भएर के भो त
प्यारी ¤ छोराजस्तो छोरी कहाँ हुन्छन् र ¤ तिमी ढिपी नगर न प्यारी ¤ कमसे कम मेरो मन पनि राखिदेऊ ¤ एउटा छोरो पाइदेऊ प्यारी, एउटा छोरो ¤ प्लिज, प्लिज ¤ एउटा छोरो प्लिज ¤ प्यारी… प्लिज… एउटा छोरो ¤ द्घ